musha Europe Fomura Imwe Dhiraivha Max Verstappen Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography yaMax Verstappen inokuudza Chokwadi pamusoro penyaya yake yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu Hwemhuri, Hupenyu HweRudo, Net yakakosha, Lifestyle uye Hupenyu hwePamoyo.
Zvichitaurwa zviri nyore, iyi Bio ine ongororo yakazara yezviitiko zvinoyemurika, kutanga kubva pamazuva ekutanga aMax kusvika iye ave nemukurumbira. Kubva Cradle kusvika Mukurumbira, heino pfupiso yeMemoir yake.
Max Verstappen Biography - Tarisa Hupenyu Hwake hwepakutanga uye Kukura kukuru.
Hongu, iwe unogona kunge uchiziva nezvekukwikwidza kwake Lewis Hamilton uye kudyidzana kunobatsira Sergio Perez. Zvakare, kuti ane mukurumbira wekuve mutyairi mudiki kukwikwidza muFormula One.
Zvakangodaro, havasi vazhinji vateveri vemotorsport vakatora nguva yekuverenga Max Verstappen's Bio.
Ichi ndicho chikonzero tiri pano, kuti tirambe tichivandudza. Wana kurudziro sezvatinokutora iwe muHupenyu rwendo rweF1 Driver.
Max Verstappen Yemwana Nhau:
Kune Biography Starters, zita rake rakazara ndiMax Emilian Verstappen. Max akazvarwa pazuva re30th raGunyana 1997 kuna amai vake, Sophie Kumpen, uye baba, Jos Verstappen muguta reHasselt, Belgium.
Tarisai, yekutanga pikicha yehucheche yeBelgian-Dutch racing mutyairi.
Waizviziva?… Max akazvarwa mumhuri ine nhoroondo yakapfuma ine motorsports- kubva kuna Baba vake, Amai, uye hama yekutanga.
Kunyangwe hama yake yekutanga, Anthony Krumpen, akambobviswa mukukwikwidza. Pazera ramakore mana, akatanga kudzidzira mujaho weKart. Mufananidzo wekutanga wemwana prodigy nababa vake vepamusoro (Jos) zita rakanyorwa pane kapu yake.
Kune vedu vaverengi veBiography avo vaisaziva, Kart mujaho rudzi rwemota yemitambo ine yakavhurika-vhiri, ina mavhiri mota dzinozivikanwa seyenda-karts kana shifter karts.
Max Verstappen Kukura-Kumusoro makore:
Asati asvika pazera rake rekuyaruka, mutyairi wechidiki akange atsungirira kudzidziswa kwakasimba mujaho.
Pakutanga (pazera re4), akagona kukwikwidza kuMini Junior Championship iyo yaakaita zvakanaka.
Ichokwadi ndechekuti, Max Verstappen anga achikunda karting, mujaho mujaho asati ambogona kuverenga kana kunyora.
Anozivikanwa nekutyaira kwake kwekutyaira, Max mudiki akakunda mukombe wake wekutanga wenyika pazera repfumbamwe. Sezvingatarisirwa, mukomana akajaira kutyaira mota dzinomhanyisa kubva pamazuva ake ehudiki.
Kuvabereki vaMax Verstappen, tariro yaive yekuti mukomana wavo mudiki arambe achirarama zviroto zvemhuri.
Max Verstappen Mhuri Yemhuri:
Kutanga uye pamberi pezvese, mutyairi weF1 anobva kune yakasununguka imba. Kuda motorsports kwakakosha kunhengo yega yega yemhuri yaMax Verstappen.
Ivo Baba vake, Jos Verstappen, aimbove mutyairi weFormula One akatyaira akaenda kuNetherlands. Jos aive mainstay muF1 mukati meese ma90s. Zvichakadaro, amai vake, Sophie vane mamwe marekodhi senge nyanzvi yekutamba.
Max aive nemumwe munhu wekutarisa kumusoro semwana- kwete mumwe kunze kwababa vake vaanotora mushure mechiso uye nebasa rekuona. Kutenda kune murume uyu, hupenyu hwake hwakarongwa nguva dzese.
Max Verstappen Mhuri Yakatangira:
Pano, isu ticha tora tione pane yetsika midzi yemijaho prodigy. Kutanga uye pamberi pezvese, vabereki vaMax Verstappen vane nyika dzakasiyana.
Baba vake Jos ndiDutch uye chizvarwa cheNetherlands. Kune rimwe divi, amai vake Sophie vanobva kuBelgium, inova nzvimbo yekuzvarwa yemwanakomana wavo- Hasselt chaizvo sekuonekwa pamepu.
Pamusoro pekucherechedza zvakanyatso pamusoro, iwe uchaona kuti vabereki vaMax Verstappen vaive naye muguta riri padyo chaizvo nemhuri yake midzi- Iyo Netherlands. Kunyangwe aine amai veBelgian, aigara achionekwa semumwe munhu anomiririra madzitateguru echiDutch nemidzi.
Nhasi, ane rezinesi reDutch, anonzwa chiDutch zvakanyanya sezvo achienderera mberi achipedza nguva yakakwana naBaba vake zvichienzaniswa naAmai vake kubvira pavakaparadzana.
Zvakare, achikurira mutaundi reBelgian pamuganhu weDutch, Max akazviwana azere nevanhu vechiDutch. Nekudaro, zvakaringana kutaura kuti Max Emilia Verstappen ndeweBelgian-Dutch.
Max Verstappen Dzidzo:
Pakutanga, dzidzo yepamutemo haina kuoneka seyekutanga tarisiro. Kune veDutch-Belgian, kuenda kuchikoro kwakaratidzika kunge kwakaipa zvakaipa. Icho chakanga chisiri chimwe chinhu Max akawana chinonakidza.
Nekuda kwekuzvipira kwake kumijaho, Max aifanira kusvetuka mashoma makirasi. Pfungwa yekusaenda kuchikoro yaive mukutsigirwa kuzere nababa vake, Jos.
Baba vaMax vakaona tarenda mumwanakomana wavo uye vaizochinjanisa iye kuti apinde kirasi yega yega yechikoro. Panguva iyoyo (sezvinoonekwa pazasi), mutyairi mudiki aifanirwa kunge ari kuchikoro.
Uyu ndiMax, panguva yaaifanirwa kunge ari kuchikoro.
Vasingasiye zvachose dzidzo seyakareruka, vabereki vaMax Verstappen vakabvuma kumuwanira iye wega mudzidzisi. Nekudaro, aizoenda kuchikoro kamwe pasvondo uye zvakavanzika anodzidza munguva yake yekusiya- a feat iyo inogadzira yakawanda nguva yekumhanya.
Max Verstappen Ekutanga Basa:
Kuva mwanakomana wemutyairi wemujaho ane mukurumbira, pakanga paine kumanikidza kukuru kuti iye vatevere tsoka dzaBaba vake. Akapihwa tarenda risingawanzo uye rakasviba, Max akatyaira Rotax Max Minimax pazera nyoro- pasi pekurairwa naBaba vake.
Kumuona achikwikwidza kumakwikwi eMini muLimburg, Belgium zvaireva kuti akange ave kutoenda kunzvimbo.
Max Verstappen Biography - Mugwagwa kune Mukurumbira Nhau:
Kune mukomana mudiki, zano raive rekutevera chaiyo nzira yakashandiswa nababa vake mukugona panguva yehudiki hwake. Max akatanga nekumhanyisa muCRG kart iyo baba vake yavakamboshandisa. Naizvozvo, akahwina mukwikwidzi weBelgian neDutch Minimax.
Kubudirira kwevechidiki hakuna kugumira ipapo, akahwinawo mukwikwidzi weBelgian Cadet. Kukunda kwakabatsira kuvhura musuwo kumakwikwi epasi rose mugore ra2010.
Kuenderera mberi mujaho wepasi rese kwaive nechokwadi nekuti, mune rake achiri kuyaruka, akahwina zvese zviripo kuti akunde mumujaho.
Kubva pachiitiko chake chekutanga chenyika dzese, Max akapinda mumakwikwi akati wandei, kuhwina mashoma uye kuwana ruzivo mune vamwe. Imwe yeakakunda kukunda ndeyokuti muFrance- unova mukombe weWorld KZ 2013- mujaho waakakunda aine makore gumi nemashanu.
Max Verstappen Bio - Kubudirira Nhau:
Pakutanga zvakakwana, Red Bull akaita mari pakuwana iyo Racer. Achifambira mberi nekukurumidza, akatamira muF1 akananga kubva kuF3 aine makore gumi nemanomwe panguva yeAustralia Grand Prix ya17.
Kunyangwe, yaive yakawanda hype yakatenderedza kupinda kwake muFormula One- Max kuratidza kwakazvipembedza.
Verstappen tarenda risingawanzo sezvo akabata zvinyorwa semutyairi mudiki kutanga mujaho weWorld Championship.
Pasina kupokana, Max anonunura pa-track, uye Red Bull haidi kurasikirwa neyavo nyeredzi mutyairi. Zvimwe zvese, zveBiography yemutyairi, ikozvino nhoroondo.
Max Verstappen Kufambidzana ndiani?
Kungofanana nababa vake, mutyairi weBelgian-Dutch ave nerudo rwakawanda. Akambotaura nezve zvinotevera; mutambi Saber Cook, Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Maxime Pourquie, mufananidzo wemufananidzo Joyce Godefridi, uyezve blogger, Roos van der Aa.
Ndichiri kuburitsa iyi Bio, Max ane Dilara Sanlik semusikana wake. Akatanga kufambidzana nemukadzi wechiGerman (akafananidzirwa pazasi) mu2017.
Achingova makumi maviri nemaviri uye achidanana zvakanyanya, hazvishamise kuti mudiki wechiDutch mujaho achiri asina kuroora. Sangana neMusikana waMax Verstappen, Dilara Sanlik- havasi ivo vanodanana pamwechete?
Max Verstappen Hupenyu Hwemhuri:
Nekufamba kwenguva, vezvenhau vakawana zvakaoma kuti vakurukure nezvebudiriro yebasa ravo vasina kudaidza zvinoitika kumhuri yake. Chokwadi ndechekuti, baba vaMax vagara vane hanya kwazvo kuona kubudirira kwemwanakomana wavo.
Iye kune rimwe divi akaratidzirawo nhanho yekukura kuti aone kuti maonero ababa vake nezvake aive akarurama. Heuno iye nababa vake sezvaanopemberera zuva rekuzvarwa reimwe yehafu-hanzvadzi.
Waizviziva here?… Vabereki vaMax Verstappen vakaparadzaniswa kwemakore. Kunyangwe zvakadaro, aive achiri kuwana rutsigiro ruzere kubva kwavari, pamwe nekuwedzera kwemhuri.
Nezve baba vaMax Verstappen:
Johannes Franciscus "Jos" Verstappen semwanakomana wake, aimbova mutyairi wemujaho. Iye akazvarwa muNetherlands pazuva rechina raKurume 4.
Akawana ajenda yemwanakomana wake kubva paudiki hwake uye ane akawanda mafoto anoratidzira hushamwari hwavo.
Baba vaMax Jos, anozivikanwa semudhara anobudirira muDutch F1 mujaho. Nguva pfupi apedza kusiya mujaho, akatanga kuraira mwanakomana wake muFormula One.
Asingakanganwe, Jos akaroora amai vaMax (aimbova mutyairi wekart, Sophie) mugore ra1996. Mubatanidzwa wakaburitsa vana vaviri vanoti; Max naVictoria.
Sangana nemukadzi wekutanga waJos- Sophie Kumpen anova amai vaMax. Iye anofananidzirwa padhuze nemutyairi wenhangemutange (kuruboshwe) nehanzvadzi yake, Victoria.
Nehurombo, uye nezvikonzero zvisingazivikanwe, kuroora kwaJos Verstappen naSophie kwakagara kwenguva pfupi. Kuti rugare ruve nekutonga, vaviri vakaroorana vaifanira kuenda nenzira dzakasiyana.
Jos akazoroora Kelly Van Der Waal waaive nemwanasikana wake wechipiri. Iye anoenda nezita rekuti Blue Jaye. Heuno Kelly Kelly Van Der Waal, wechipiri anozivikanwa mukadzi, uye mudzimai waJos Verstappen.
Mushure menguva yakati rebei, kupatsanurana pakati pababa vaMax Verstappen nehembe yake yemwoyo- Kelly Van Der Waal akazozivikanwa.
Izvi zvakatungamira kumuchato wechitatu waJos naSandy Sijtsma. Mubatanidzwa uyu wakaburitsa mwanakomana wechipiri wemhuri yeVerstappen uyo anoenda anonzi Jason Verstappen.
Sezvakaratidzwa, Jos Verstappen anotora pikicha nemurume wake wechitatu, Sandy Sijtsma.
Nezve Amai vaMax Verstappen:
Kufanana nemumwe mutyairi wekare-wekarting, mufaro wevamwe amai mune ino nharaunda yemitambo mama vari kuona vana vavo vachizadzisa magumo avo nenzira yakanaka.
Ichi ndicho chinzvimbo chaSophie-Marie Kumpen anova amai vaMax Verstappen. Inoratidzwa pazasi, akazvarwa muna 1975 kuna Robert Kumpen, aimbove Sachigaro weBelgian nhabvu kirabhu. Kupemberera zuva raAmai nguva dzose kwakakosha kune vese amai nemwanakomana.
Mushure mekubudirira kukuru mukutamba, amai vaMax Verstappen vakapinda mubhizinesi rekutakura zvinhu nengoro muBelgium.
Zvizhinji nezveMax Verstappen's Sibling:
Nenhengo zhinji mumhuri yake dzinoda mujaho, hazvishamise kuziva kuti hanzvadzi yake diki, Victoria-Jane Verstappen, mutambi wekart.
Victoria-Jane ane makumi maviri panguva yekunyora uye iye anobatsira Red Bull Netherlands kuseri kwezviitiko.
Inoratidzwa pazasi, iye ndewemagariro media savvy, ane vanopfuura 110,000 vateveri pa Instagram uye zvimwe zvakawanda pa Twitter neYouTube. Heunoi Max, achiti Merry Christmas nehanzvadzi yake Victoria-Jane nevamwe maStepsiblings.
Pamwe hauna kumboziva… Victoria-Jane Verstappen asides kubva pakuve wezvemagariro venhau nyeredzi, iri zvakare runako uye fashoni vlogger nemufashoni mutsara- Unleashthelion. Panguva yekunyora, iye nemukomana wake, Tom Heuts, vari kutarisira mwana munguva pfupi.
Nezve hama dzaMax Verstappen:
Sezvambotaurwa, mazhinji emitezo yemhuri yake akawedzera vatambi. Ngatitangei nasekuru vaMax, Anthony Kumpen. Aimbove nyanzvi yekumhanyisa mutyairi kubva kuBelgium.
Kunyangwe izvozvi zvakamiswa kusvika 2022 yekushandisa zvinodhaka, Anthony muna2014 na2016 akakunda mukwikwi weNASCAR Whelen Euro Series kaviri. Sekuru vaMax Verstappen- Anthony Kumpen anoonekwa pazasi pamberi peKart Race.
Zvakare kumhuri yake yakatambanuka, Paul Kumpen naFrans Verstappen ndisekuru vaMax vaviri (2) uye vari kuita zvemitambo. Tete vake ndiGriet Vanhees uye hama dzake vari; Laura Kumpen naHenri-Constant Kumpen.
Max Verstappen Hupenyu hweMunhu:
Ngatitarisei nekukurumidza kurongwa kwaMax parutivi nebasa rake. Ari kure nemujaho, Max anotora maekisesaizi ake emuviri zvakakomba uye anonakidzwa nekushanda. Seimwe yezvaanofarira kuita, anowana nguva yekutenderera senzira yekuzvichengeta.
Pachinyorwa chako pachako, zvinokatyamadza kuziva kuti mutyairi weF1 anotya madandemutande. Iye zvakare haafarire kuona kweshark.
Max Verstappen Mararamiro:
Achipindura kumubvunzo wekuti anoshandisa sei mari yake, mujaho wechiDutch anobvuma kuti haararame hupenyu hwoumbozha. Nekudaro, iye anoziva mashandisiro emari yake mukuwana imba yakanaka.
Max anogara muimba yeumbozha muguta rePosh reMonaco, ine mukurumbira nehupfumi hwayo hwakawandisa, makasino.
Nzvimbo iyi zvakare ine zviitiko zvinonakidza seMonaco Yacht Show uye iyo Monaco Grand Prix. Tarisai, mukati meMax miriyoni mapaundi mufurati muMonaco.
Max Verstappen Asiri Mujaho Mota:
Semunhu anomhanyisa kart, zvakajairika kuti uve anoda mota. Mutyairi weF1 ane Renault Sport RS iyo yaakatenga muna 2015 semotokari yake yekutanga.
Iyewo ane mota dzinotevera; Aston Martin DB11, 2018 Vantage, uye Porsche 911 GT3 RS supercar. Tarisa uone imwe yeanotasva mabhiza ake.
Max Verstappen Net Kukosha:
Kunyangwe zvake zera diki uye rakapfupika basa kusvika parizvino, kukosha kwemari kwemutyairi kunoratidzika kunge kunoshamisa. Zvinoenderana ne sportekz, mari yaMax Verstappen inokosha inenge madhora makumi maviri nemaviri emadhora nekuda kwekubvumidzwa kwakawanda.
Max Verstappen Chokwadi Mubhadharo:
NeFormula One Racing, sesosi yake yehupfumi. Muhoro wepagore waMax kuRed Bull unomuisa pakati pemhangura yepamusoro yemutambo.
Mhedzisiro kubva mukutsvagisa inoratidza kuti muhoro wake, mumakore maviri chete ane kuwedzera kwe800%.
Verstappen ane yazvino muhoro muhoro ndeyeUS $ 10 miriyoni, zvichienzaniswa neUS $ 3 miriyoni muna 2017 uye US $ 600,000 muna 2016. Kutenda kune cooly fair chibvumirano chaakasaina neRed Bull, chibvumirano chaizogara kusvika 2021.
Max Verstappen Chokwadi:
Ichi chikamu chinounza iwe zvimwe zvisingaverengeke chokwadi nezve iyo Fomula Imwe Mutyairi. Pasina yakawanda ado, ngatitangei.
Chokwadi # 1 - He Inobata akati wandei 'Mudiki' Zvinyorwa:
Max ndiye mutyairi mudiki kukwikwidza muF1, pazera remakore gumi nemanomwe nemazuva gumi nematanhatu. Akawana rekodhi paakachaira timu yeToro Rosso mu17.
Hazvigumiri ipapo, ndiye zvakare mudiki F1 anokunda munhoroondo, mumujaho wake wekutanga weRed Bull. Akazviita muSpanish Grand Prix pazera remakore gumi nemasere nemazuva makumi maviri nemaviri.
Chokwadi #2 - Multiple Endorsements:
Kuwedzera kuri kuita mukurumbira kwaMax uye mafeni zvinomuita kuti anyanyodiwa pakati pemhando, nekudaro zvichimuita mumwe wevatyairi vanotengesa zvakanyanya pagridhi. Vatsigiri vake vakuru vanosanganisira maJumbo Supermarket, Ziggo, Red Bull, G-Star Raw, uye CarNext.
Chokwadi #3 - Charity Basa uye Nheyo:
Angori akati wandei madhiraivha eF1, Max anozvibatanidzira mune zvechiitiko zviitiko zvekupa. Iye ari chikamu cheCharity Stars uyo akamhanya mumutambo weRed Bull-wakatsigirwa wesangano muna2017.
Zvakare, mukutanga kwegore ra2020, Verstappen akapa mari isingazivikanwe kune anowana mari semubatsiro weKoalas, yakakanganiswa nemoto wesango muAustralia.
Chokwadi #4 - Mauto eOrange:
Zvinoshamisa, ane mauto evateveri vanozvidaidza kuti Mauto eOrange uye vanopfeka maT-shirts eOrange kune mazhinji emarudzi eEurope. VaMax's Fans vanogona kubatana naye kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana, kusanganisira maakaunzi enhau enhau uye webhusaiti yake yepamutemo.
Chokwadi #5 - Chitendero chaMax Verstappen:
Mutyairi weFormula One akarerwa mukatorike nevabereki vake. Iwe, anoenda kuchechi yeWallongong, boka remazuva ano. Max, sekutaura kwevazhinji, anonamata uye akataura pachena pamusoro pezvaaitenda nezvaanotenda kakawanda.
Tafura iyi inoputsika Max Verstappen Chokwadi.
Max Verstappen's Bio Dhata
Zita rizere: Max Emilian Verstappen
Zita rekudanwa: Max Verstappen
Zuva rekuzvarwa: 30th yaGunyana 1997
Baba: Johannes Franciscus "Jos" Verstappen
Amai: Sophie-Marie Kumpen
Musikana: Dilara Sanlik
Vanun'una: Victoria-Jane Verstappen (hanzvadzi), Blue Jaye (halfsister), Jason (halfbrother)
Hama: Anthony Kumpen (sekuru), Paul Kumpen naFrans Verstappen (GrandDads), Griet Vanhees (Amainini), naLaura Kumpen naHenri-Constant Kumpen (hama dzemurume)
Muhoro: $ 10 mamirioni pagore
Net Worth: $ 22 miriyoni (sportekz)
kukwirira: 1.80 M
Social Media: Instagram (@ Maxverstappen1), Twitter (@ Max33Verstappen) uye YouTube (@max verstappen)
Muchidimbu tisati tabuda, tinofungidzira kuti wakanakidzwa neshanduro yedu yeMax Verstappen's Biography. Race Mutyairi, kubva paudiki, ane tarenda, yakarerwa nababa vake, uye akashinga kuitevera. Zvakare nehungwaru, akunda maMakwikwi.
Kunyanya zvakadaro, vabereki vaMax Verstappen- kunyanya baba vake, vakapa rairo uye hwaro kuti iye aise tarenda rake rekumhanya iro rakauya kwaari zvakasununguka.
Tinovimba kuti iwe unogovana ruzivo rwako nesu nezveMax Verstappen's Bio. Isu tinoedza kusimbisa iwe zvakanyanya chokwadi pamwe neepamusoro-notch kunyatso uye kusarongeka. Nekudaro, tisvike isu muchikamu chekutaura kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaite senge chakanaka.